TechGameBox – Ndị egwuregwu ụwa
Usoro XBOX X/S
Ihe nganga efu na-abịa na ogige Point Two na ntọhapụ
A ga-etinye ihe n'ime egwuregwu n'efu na Ogige Point Two mgbe ọ wepụtara na 9th Ọgọst. Ngwugwu ihe a ga-agụnye ihe ndị nwere agba agba na egwurugwu dị ka akwa akwa, akwa akwa, ọkọlọtọ na ihe ndị ọzọ, ọ ga-enwere onwe ya ruo mgbe ebighị ebi n'ofe ikpo okwu niile. isi iyi
Categories News Hapụ ikwu
A kọrọ na Pokémon Go dev na-achụpụ 8% nke ndị ọrụ, kagbuo ọrụ anọ ọzọ
Onye nrụpụta Pokémon Go Niantic agbagoro ndị ọrụ ya 85 ruo 90 wee kagbuo ọrụ mmepe anọ ya - gụnyere egwuregwu Transformers ekwuputara na mbụ yana mmekorita ya na ụlọ ọrụ ihe nkiri Punchdrunk - n'etiti "ọgba aghara akụ na ụba" maka ụlọ ọrụ ahụ. N'ime ozi ahụ, ekwuru na Hanke boro ebubo ịkagbu ọrụ taa na… GỤKWUO
Gbanyụọ Isiokwu: Ịhụnanya na-agba na braid na Nke a bụ otu ị ga-esi tụfuo agha oge
"Blue m kacha aghụghọ." Uhie na-ede na Blue. Ọ na-ahapụ akwụkwọ ozi ya n'ime ite mmiri na-esi esi na igwe MRI. Blue na-edegara Red. Ọ na-ahapụ akwụkwọ ozi ya na nnukwu magma ka Atlantis bibiri. Nwayọọ nwayọọ, ọ na-abịara m na nke a bụ - gịnị bụ okwu echefuru echefu? - akwụkwọ ozi… GỤKWUO
Lelee Nintendo Direct taa ebe a
N'ikpeazụ, anyị nwere ezigbo Nintendo Direct setịpụrụ na nhazi oge. Banye n'elekere abụọ nke ehihie UK maka ngosi ọkwa na-adịru nkeji iri abụọ na ise, gbadoro ụkwụ na egwuregwu ndị ọzọ. Na-atụ anya ile anya egwuregwu Switch nke ụlọ ọrụ na-abụghị Nintendo mere - yabụ, enweghị olileanya maka Zelda: Ume nke anụ ọhịa 2 ozi ebe a. isi iyi
Hideo Kojima mere atụmatụ n'otu oge ọrụ dike dị ka Amazon's The Boys
Death Stranding's Hideo Kojima ekpughere na ọ na-esi nri otu oge yiri usoro dike Amazon The Boys. "Akwụsịrị m mgbe usoro atọ nke oge mbụ," Kojima dere na Twitter, na-atụle usoro ahụ. “Echere m na m ga-ekiri ihe nkiri ndị ọzọ. N'ezie, ahụrụ m ihe nkiri ole na ole ewepụtara na… GỤKWUO
Iwu asụsụ na-ese okwu ga-emetụta ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo Quebec
Ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo na Quebec ga-emetụta iwu asụsụ ọhụrụ na-ese okwu. Ebumnuche nke Bill 96 bụ iwusi iwu asụsụ mpaghara ndị na-asụ French ike, hụ na French bụ asụsụ a na-asụ n'ihe niile site na azụmahịa ruo na ahụike. Agbanyeghị, a na-atụ egwu na nke a ga-achụpụ ndị na-abụghị ndị na-asụ French na ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo dị ukwuu nke Quebec. … GỤKWUO
Blade Runner remaster nke akpọrọ nke ukwuu na-agụnye ụdị anaghị emegharị na Steam
Dev tweets foto mbụ nke PS VR 2 n'ime ọhịa, na-ehichapụ ya
Anyị niile maara na ọ na-aga, mana PS VR2 ka bụ ihe omimi nye ndị anyị na-amaghị maka ọrụ ime na Sony. Agbanyeghị, otu onye nrụpụta ekekọrịtala (ma wepụrụ ngwa ngwa) foto nke PS VR2 ewepụtara na ụwa n'ezie. Foto a sitere na Bit… GỤKWUO
Mpempe PC ọhụrụ Resident Evil na-emebi ihe onyonyo wee rụsie ọrụ ike
Enwetaghị m ọtụtụ ihe dị mma ikwu, mana enweghị obi abụọ ọ bụla gbasara ya: nkwado ray na-enye nkwalite n'ogo n'ozuzu ya, kpọmkwem n'ihi na echiche RT na-edochi echiche ihuenyo dị egwu nke a chọtara na ụdị ochie. Ọkụ zuru ụwa ọnụ nke ray na-achọpụta bụkwa ihe dị mma gbakwunyere, na-edochi oghere ihu ihu ihu na nke ziri ezi karịa… GỤKWUO
Harvestella dị ka Final Fantasy zutere Stardew Valley
Harvestella bụ sim RPG ndụ ọhụrụ sitere na Square Enix na-abịa na Switch na Steam na Nọvemba. Ọ bụ Final Fantasy na-ezute Stardew Valley, na egwuregwu egwuregwu gụnyere ilekọta ihe ọkụkụ, imeta ndị obodo enyi, na ịgagharị ụlọ mkpọrọ. Nkà echiche bụ nke Isamu Kamikokuryo nke Final Fantasy 12 ama ama, na egwu bụ nke Go Shiina sitere na usoro Tales. … GỤKWUO
Gmail maka gam akporo, iOS tinye akara ngosi 'Nchekwa ejiri' dabara adaba
30 June 2022 by ngosi
Na webụ, Gmail achọpụtala ogologo nchekwa ole ị na-eji na ala nke ibe ahụ. Ihe ngosi "Nchekwa ejiri" dị ugbu a na Gmail maka gam akporo na iOS iji zọpụta gị site na mkpa imepe ngwa ọzọ ma ọ bụ webụsaịtị maka njikwa oghere. Ọzọ…. Edemede izizi
Categories tech Hapụ ikwu
RIP RTX 3080 12GB - ịkwesighi ịdị adị na mbụ
A na-eche na Nvidia kwụsịrị mmepụta maka kaadị eserese GeForce RTX 3080 12GB, ụdị dị ike karịa nke mbụ RTX 3080 GPU. Ọ dị mkpa iburu n'obi na nke a abụghị ọkwa ọkwa, yabụ were ntakịrị nnu were ozi a, mana onye ọrụ Twitter na onye na-anụ ọkụ n'obi GPU @Zed_Wang na-ekwu na kaadị ahụ agaghị… GỤKWUO
Categories Review Hapụ ikwu
Ekwentị Asus ROG 6 na-abịa na Julaị 5 na-eguzogide mmiri na onye ọzọ na-eme ka ọ dị jụụ
Usoro ekwentị Asus ROG juputara na nhọrọ dị ike na nke ọma, na ụdị ọhụrụ dị nso n'akụkụ. N'akụkụ ụfọdụ ntapu, anyị nwere ugbu a ihe anya ka a ntọhapụ ụbọchị maka Asus ROG ekwentị 6. ọzọ… Original Nkeji edemede
Page1 Page2 ... Page3,969 Osote →
© 2022 TechGameBox • Wuru na GeneratePress